Khamiis, May 10, 2012 - Kulankii Qoreyaasha Soomaalida oo lagu qabanayo magaalada Helsinki ee dalka Finland. Kulankii Qoreyaasha Soomaaliyeed oo sanadkiiba mar lagu qaban jiray magaalada Helsinki, ee dalka Finland waxaa ugu horreyn hadallo soo dhaweyn & ammaan ka jeediyay xoghayaha guud wasaaradda waxbarashada & dhaqanka ee dalka Finland Jarmo Linden. Sidoo kale waxaa isna halkaasi hadallo qiimo leh ka soo jeediyay C/raxmaan Cali Jiimi oo ah sarkaalka u qaabilsan adeegyada kala duwanaanshiyaha & isku dhaweynta dhinacyada dhaqamada & afafka kala duwan.
Barnaamijkaan oo ah kii 8aad ee la qabto is ee Taariikhda, Dhaqanka & Suugaanta Soomaalida isla markaana uu gacan weyn ka geysto C/raxmaan Cali Jiimi oo ah sarkaal ka tirsan saraakiisha adeegyada bulshada ee dalkaasi Finland iyadoo bulshada Soomaaliteed ee ku dhaqan dalkaasina ay ka faa�iideysteen muddadii uu C/raxmaan Jiimi ku howlaa arrimahan iyaga ah.
Kulankan ka qeybgalaya Qoreyaasha kala ah;- 1. C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban"-UK
Haddaba waxaa iyadna halkaasi hadallo qiimo badan badan ka soo jeedisay madaxa Espoo Sello Library Sunniva Drake, waxaana furitaankii barnaamijkan ee maanta ka soo qeybgalay dad kor u dhaafayay 270 � 300 oo ruux oo isu jirtay qeybaha bulshada Soomaaliyeed eek u dhaqan magaaladaasi..